Ukuqulunqwa kobugcisa bokuPhilisa. Canva
Igalari yoBugcisa boBuchule bendawo yangaphakathi yindawo yokubonisa yabafundi abafake iifoto zabo zendalo zokuphulukisa ubugcisa. Ulwaphulo lobugcisa ngumsebenzi ophilisa intliziyo nomphefumlo. Yakha indawo yokutya ukuze uveze ukwesaba okanye uvakalise iimvakalelo zakho zangaphakathi. Ukuboniswa apha ziphumo zonyango lobugcisa kwiyona nto ibaluleke kakhulu.
Ngaba wakha ubugcisa (imidwebo, imizobo, imifanekiso, iingubo, ubugcisa, iiprojekthi, okanye ezinye izinto zobugcisa) njengendlela yokwelapha? Ukuba ungathanda ukuba nomnye wezonyango zobugcisa bakho ezicatshangelwe ukuba zifakwe kwi-Gallery Art yangaphakathi yezobuGcisa zikhangele umyalezo wangasese kwi-Facebook kunye nebali lakho kunye nesinamathiselo.
02 ngo 31
Umboni. I-Paalter Primal, uLaurie Bain
Umboniso ngumzobo wokuqala nguLaurie Bain, i-AKA Primal Painter.
U-Laurie uthi: " Umboni uhlala kwihlabathi elingaphantsi kwamaphupha apho ukhokelo kunye nokuphefumlelwa kwintlambo yolwandle, imibala kunye nemifanekiso.
Injongo yoMboniso kukusinceda singene ngaphakathi, ukufikelela nokutolika ukukhanya kweengqiqo ezivela kwi-intuition kunye namaphupha ethu. Uyasinceda sahlukanise iindaba ezivela kwiingcamango kwaye sihlakulele intembelo enyanisweni yamasiko ethu.
Yonke yobugcisa bam idibene noMthombo kwaye ifakwe ngentshukumo emandla kaReiki amandla okuphulukisa, ukukhanya kunye nothando ngohlobo lwemibala kunye neepateni. Abantu abanomdla kumandla, banokuvakalelwa ngendlela yokududuza, ukubetha, i-goosebumps okanye ukuphakamisa kwimoya kunye nokuphila kakuhle.
Kunzima ukuchaza indlela endenza ngayo kodwa ndiza kuzama! Ndiyakucima ubuchopho, ndibeke i-ego yam eceleni, nxu lumene noMthombo, kwaye ndivumele amandla angcolileyo aphumelele entlakweni yam intloko, ezandleni zam amehlo nangama-art. Ivakalelwa ngathi ndibane isibane esitshisa esibomkhulu sam intloko, izandla zam zinyuka kwaye zibonakala zikwazi ukwenza ntoni ngaphandle kokuphazamiseka kwengqondo kum. Yindlela yokucamngca, kwaye ihlala iphilisa. "
Umntwana Omncinci kunye neBlack Balloon
Umntwana Omncinci kunye neBlack Balloon. Debby Kirby
Lo mdwebo ochukumisayo othi "Umntwana Omncinane kunye neBlack Balloon" wanikelwa ngumculi wase-UK, uDebby Kirby, kwi-Newtown Memorial Fund.
Debby uthi: "Ndivakalelwa kukuba isipho sam sinikwe nguThixo kwaye ndiye ndasikelelwa. Ndichitha ixesha elininzi lokwenza ubugcisa bam kwiilayibrari."
I-Red Cross Collage. © Scott K Smith
Lo mzekeliso ngumzamo wokusebenzisana wezithombe zembali, ukucingwa kwezenzululwazi, kunye nobugcisa bezithombe ze-photographer ezivela kwiinkonzo zegazi le-Red Cross, ezilungisiweyo, eziphuculweyo kunye ne-collage nguScott K Smith.
Ininzi yale mifanekiso ihlanganisene ngokwabo, ngexesha lokucwangcisa lonke ulwazi andinakuze ndixelele oko kuza kuza kumgudu wokusebenzisana phakathi kwam nomthombo / ugqozi.
Umfanekiso owubonayo ekugqibeleni waba yinkomfa ekhutshwe ngumxholo wephepha elibizwa ngokuba yi-PULSE (Iinkonzo zegazi le-Southern Cross Red Blood Services). Ikholaji yezihloko kumfanekiso onjenge-HIV / AIDS kunye nophando; UDkt. Charles R Drew, kunye nomntwana ovela eAfrika (ilizwe elingachazwanga) elinaye, eliphambili kwisihloko segazi, impilo kunye nokufuna ukunyanga.
Umntwana uba ngundoqo kwizithombe, ezenziwe phakathi kweeseli ezibomvu zegazi, kunye noDkt. Drew, ezijikelezwe yintlango indawo yokuphulukiswa ezininzi, eguqulwa yimpilo yendalo kunye namandla omhlaba wehlabathi, kunye negunya labantu abaphefumlelweyo abafuna, ngokholo nasenzululeni ukuphucula bonke abantu.
Kwindoda yam. kavita Nayar
kavita Nayar uthi:
Ndingumculi ozimelayo owenza imifanekiso yeoli kunye ne-acrylics, i-etchings, i-Lithographs kunye nama-silkscreens. Ndilikhumbula yam intombi. Ndimele ndiqhubeke ndidala ukuphilisa intliziyo yam nomphefumlo.
Inkqubo yam "Umlingisi wangaphakathi"
Ngale mi sebenzi ndihlala ndidibana nentombi yam engekho ehlabathini lam. Ndiziva ndixhamle ngokomoya xa ndidweba ientyatyambo ye-lotus kunye nomntwana ongakazalwa. Kuze kube kabini emva kwam ndingazi ukuba kutheni ndiyicwecwe okanye ndidwebe iiflethi ze-lotus kunye nomntwana. Ndandifunde ukuba le lotus ibonisa ukuzalwa kukaThixo kunye nendalo ngokwayo. Isitshixo se-lotus siboniswa njengentambo yomnxeba exhunywe kumntwana. Undishiya ndididekile ... kodwa uphilisa.
Yimiyezo yaseMythcal. Umculi: Kattya Glavina K.
U Kattya Glavina K uthi:
Ubugcisa bam bubukhali kwaye bunamathele ekuqhubekeni kwendalo. Ndicinga ukuba ngumculi weMboniso weFusion. Ipeyinti ithatha uhambo lokuzifumanisa kunye kwaye linika izikhokelo kunye nezixhobo zokunceda abanye. Ndiyayithanda imiyalezo engummangaliso kunye nemilingo yemithi, ijometri engcwele, iimpawu kunye nabadansi bebele. Ininzi ndiyidala i-Art kunye nokuphulukiswa kwamashishini ngemibala, imilo kunye nemiqondiso endiva ngayo kubaxhasi kunye nabahlobo bam kunye kunye okanye ngamanye amaxesha kuvele nje kuphela.
Ngokuqhelekileyo ndiqala iseshoni yam yokupenda ngenjongo kwaye ndicele ukukhokelwa kwangaphakathi, ndilungiselele umgca wam kwaye ndiwugcine umgca uze udibanise imigca okanye iifom, ngoko ndiyazi into endiyenzayo, ivele nje ihamba kwaye isiqwenga sibonakala, ngamanye amaxesha kufuneka uhambe kwinqanaba leentsuku ezimbalwa kude kube yinto endiyibongoza ukuba ndiyizalise. Ndiyathanda ukuba ibe yinkqubo engenamsebenzi kunye nemvelo.
Ndaqala ukupenda ngeminyaka embalwa edlulileyo xa umtshato wam usuphelile kwaye ndaziva ndilahlekile kwilizwe lasemzini kunye neentsana ezimbini, kodwa ngokukhokelwa nguThixo ngoku ndiphila ubomi bokudala kwaye ndibe nexesha lokuba ndibe nandipha abantwana bam.
Xa ndipaka uvuyo kunye nenkonzo yenkonzo yile ndlela ihamba ngendlela yokudala.
Xa umzobo owenziweyo ndihlala kwimeko yokubulela kwindalo yonke ukuba ndivumele ukuthumela imiyalezo kwinqanawa yam eyenza umehluko ebomini bam nakwabanye.
Kuphela iimvakalelo ezintle xa iprojekthi igqityiwe kwaye ukuqonda ukuba ndiyinxalenye yamandla okudala.
"Ukusasazwa kweNkathazo" ukudweba kwekreyra yesithsaba ngomlobi onokubonga uTameko Barnett
UTameko Barnett uthi ndiye ndaza ndaza ndaza ndaza ndaza ndazityhila kunye nezinye iindidi zemisebenzi kunye neminyaka. Ukuphulukiswa kobugcisa kuthetha izinto ezininzi kum - kungaba ngumgangatho ofana noReiki, kodwa uthetha ngomculo, iincwadi, imizobo, imifanekiso. Ubugcisa bokuphilisa kuyindlela elula yokuphilisa umntu ngaphakathi ngaphakathi. Inkqubo yam "Umlingisi wangaphakathi" Ndaye eholide ukusuka emsebenzini ngo-2008 kwaye ngokukhawuleza ndagqiba ukuthenga iimitha eziyi-8x10 kwaye ndiqale ukupenda. Ndade ndinezibetho kunye neepende zezo zonke iindidi, ngoko kwakuyinto nje yokuhamba nokuhamba. Kwakunjalo ngokukhawuleza. Andizange ndiyilungise ngaphambi kwexesha. Ndiyicinga ukuba ndiza kubiza, "umgca wokuqonda" umzobo.
Kuphilisa kakhulu. Kuthethwa ukuba kukuba kuba malunga ne-Root chakra kunye ne-Crown Chakra, ephathelele ukugxila kunye nokugxilwa.
Ukuziva ukhuselekile kwaye ukhuselekile kwihlabathi lokungaqiniseki. Kuyandivuyisa ukuba ndijonge ngenxa yokuba uyandikhumbuza ukuba ndibekelwe.
I-Crown ingifundisa ukuba ndiphile njengokomoya ngokwam.
Umsondisifundisa ukuba ndiphile ngamava omntu ngokuthula kwaye ndizama ukuvisisana nokulinganisela.
Elilawulayo Amandla Amandla
UThixokazi oqaqambileyo kwiSlumber.
Ndisoloko ndibe 'ngumbukeli wobugcisa' kodwa ndingayifumana indlela yokuzibonakalisa ngobuciko. Emva koko ndafumanisa ukuba kukho isifo esisongela ubomi kwaye ngexesha lokuhlaziya kwam, ndithatha 'ukuzonwabisa' nje kuphela. Kwakumnandi gqitha ukuba ndakhupha ezinye zeedelsel zamama zandipha kwaye ndaqalisa ukuyila. . . kwaye izinto zaqala ukuqhubeka. Imifanekiso eyenziwe ukusuka kumgca owodwa onqamlekileyo kwiphepha. Xa ndandisenza ngcono ngakumbi ndivakalelwa kwaye ngakumbi ndayikrazula. Ndonwabile ngakumbi kwaye ndivakalelwa kakhulu ngekamva lam.
UThixokazi wam olele waqalwa njengomntu olula 8 kwiphepha. Ndasebenzisa i-pastel ephuzi kwaye ndayiphinda kwakhona. Ndazi ukuba ndifuna umfanekiso womntu, umzimba okhanyayo. Kwaye njengoko ndasebenza kulo mfanekiso 8 indlela endicinga ngayo ukuba kufuneka ukuba umzimba ulele kwaye ugcinwe ngokukhanya kunye nomnyama. Umfanekiso okhanyayo apho ubona khona i-chakras ihamba ngokukhawuleza. Ndiye ndatyelela abaninzi oothixokazi ekulala kodwa ndiyakuthanda lo wokuqala kuqala.
Mnandi nje, eso sifundo esibaluleke kakhulu. Akunandaba nokuba umsebenzi ulungile okanye awukho. Ukuzonwabisa nemibala, kunye nomzobo kunye nawe.
Xa abanye bebuza 'Yintoni na?' nje ukumomotheka uze ubabuze oko bakubonayo. Jonga ngamehlo abo. Banike isiqephu sephepha uze ubacele ukuba bajoyine. Ingakuvula ngakumbi nakwinkqubo yokudala.
Ulwaphulo lweNtsana yabantwana
ME MacLaren uthi:
Ubugcisa bam bokuphulukisa ngumbumbi weCards Child Healing Cards endiyidalile. Idokethi yavela kwimidwebo emibini eyenziwa ngumntwana wam wangaphakathi ngexesha lam umsebenzi wokuphulukisa. Izikhokelo zam zomoya zandithuthuzela ukuba ndidale ipakethi yamakhadi ngoba kukho amandla amaninzi okuphilisa avela kumbono wam ukuya kumbukeli. Ndiyintloko yeReiki kwaye la magunya asemasangweni. Amakhadi omfanekiso wabantwana ukususela emncinci ukuya kwiminyaka eyi-10 kwiimeko ezahlukeneyo zobuntwana, abanye banolonwabo, bangela into embi. Injongo yedokodo ukuzisa izikhumbuzo zakudala ebuntwaneni ukuze zibukwe kwakhona, ziphinde zihlolwe njengomntu omdala kwaye zicutshungulwe.
Imidwebo yam yenziwe emva kokuba ndicele omnye wabantwana bam abangaphakathi ukuba andixelele ngenye inxalenye yobomi bam endingayikhumbuliyo. Xa ndiseyingane, abazali bam bagula kwaye babengakwazi ukundikhathalela ngoko ndashiywe kwiziko. Ndaye ndahlala apho ndade ndine ezine nesiqingatha.
Ndinokukhumbula kancinane ngeli xesha, ngoko ndacela umntanami ukuba unako / ungandixelela nantoni na ngamava ethu. Ndammema ukuba ahlale ekhondweni lam kunye nam etafileni yekhitshi kwaye asebenzise iipensela kunye namanqaku omlingo ukwenza umzobo malunga nelo xesha ukuba ufuna. Wenza kwaye wandimangalisa ngemifanekiso emininzi kakhulu. Njalo xa ndijonga kwimifanekiso endiyakwazi ukuyikhupha nokuyikhulula enye intlungu kunye noloyiko oluxhomekeke ekushiyweni kwam ndiba ngumntwana. Le mizobo kunye nabanye kwindawo ekhuselekileyo baye baba namathuluzi amakhulu okuphulukisa kum.
Ndiyaziqhenya kakhulu ngemidwebo yam kunye nekhadi lamakhadi. Inika uluhlu olupheleleyo lweemvakalelo, ukusuka ekuvuyiseni kuya kwesoyika ukuziva uthanda kwaye uncedwa. Akusiyo kuphela imithombo yokuphulukisa eyimfuneko kum; inokusetyenziswa ngumntu. Sonke sinabantwana abangaphakathi, abaninzi babo abalinde kwaye benethemba lokuva kuthi. Amakhadi adibanisa ngqo neemvakalelo zabo kwaye anikezela indlela yokuba bathethe ngokuthe ngqo nathi.
Ikhonkco isisityebi esinamandla sabathinteli, amaqela angama-12, abasebenzi bezentlalo kunye namaqela enkxaso ye-oncology.
Umfazi waseWhiteehorse uthi:
Ezi zinto ndizenzayo kwaye zithetha ukuba ndingubani. Ndenza ubumbi kwivili kwaye yenza i-rak firings. Ndenza ibhasikidi, umhlanga, i-pinene andle. Ndenza ubude beglasi kwaye ndenza ezinye iiglasi ezigubungelweyo.
Ndiyadla nantoni na into esele ide. Ndibambe isangqa (imibuthano yeqela lomthandazo kunye nokuphilisa) ekhayeni lam iminyaka emininzi ngoku. Ndifundisa malunga nevili leyeza, ukuhamba nokuhamba ngokulinganisela. Njalo emva kwexesha umntu uza kuthetha nam ekufundiseni kwenye yezinto zam zokudala.
Ukubuyisela ukuTywala koTywala ngokuPhathwa kwezoTywala.
Ukufumana utywala kunye neziyobisi, uKalihwiyostha Thompson, uthi:
Ndingumzali ongabodwa wabantwana abane kunye nezilwanyana ezi-2. Ndivela kwisizwe sabantu abaqinileyo nabanamandla, abaye banyamezela kakhulu kwiminyaka .. Ndiyaziqhenya kakhulu ngelifa lam Iroquois.
Kuba ndiphulukisa ubugcisa kuthetha ukuvumela ukuba ndiveze iimvakalelo zam ezinzulu ngendlela endifanayo, ndingakhathazeki ngento abanye abantu abacinga ngayo, okanye nokuba ubani oya kuwuqonda. Kungenxa yam. Ukuvumela ukuba ndikhululeke nayiphi na imithintelo, kunye nenkqubo yokusebenza ngeemvakalelo zam ngendlela enempilo, ngesantya sam.
Le nkqubo yaqala xa ndiqala ukugqiba ukwenza utshintsho lokuphila. Ndakufuna ukufumana uxhumano, kwaye ndibone ukuba yintoni endiyenzile apha ukuba ndiyenze. Ndandifuna ukwazi oko kwakungaphakathi kwam okukuvimbela ukukhula kwam, ngokwengqondo, ngokomoya, ngokomoya, ngokomzimba nangokwemvelo. Kuba ndihlala ndiyazi ukuba ndinamakhono athile. Ndandisoyika ukuwasebenzisa. Phakathi kwendwendwe yam ndiye ndafumana ezininzi izityhilelo. Ukunxibelelana nomoya / umthombo kuyinto emangalisayo! :)
Ndiziva ndiziqhenyce ngokuqhekeza kwam, ndiyazibonakalisa. Xa ndijonga ngayo, ikhumbuza ukuba ndivuya gqitha xa ndivumela ukuba ndiziva ndidibene nendawo yonke. Kwimi isisikhumbuzo esihle, esigcina ndihamba endleleni yam yokuphilisa.
Ubugcisa bokubukela. EBet Budesheim
IBhete Budesheim ithi:
Ndidala ubugcisa kunye neenjongo zokuphulukisa mna kunye nabanye, kuquka ukuphulukisa i-mandalas, imizobo yombono, kunye nee-commissions zabo.
Ndibona imifanekiso engaphakathi, amandla kumzobo kunye nesimboli, kunye nokuphupha / amaphupha okulala. Oku kudla ngokuba yiqalo leqhekeza. Emva koko ndiqhubeka ngokusebenza nge-intuitively, emva kokuhamba kunye nokuphulaphula isiqwengana, kunye nento efuna ukuza kuyo.
Thembela izibongozo ngexesha.
Yithemba intuition, ngokwenza njalo, ucezu lobugcisa lithetha kwakhona kwaye lunikezela ngaphezu kokuba lwaluqala ukukhulelwa.
ukuphilisa ubugcisa. Malvika.vazalwar
Ndiyakuthanda ukuhlola, ukufunda nokuphulaphula. Ukuzibonakalisa ngokuzibonakalisa ngendlela yokubhala, ukupenda kunye nekhwelo kunceda ndifune inyaniso yam.
Ubugcisa bokuphulukisa: Ukuvumela nokunika amandla amandla akho atshabalalayo ukuba ashicilelwe kwisiqhelo (ngokwakho) ukuya kwelinye (umgca, njl njl), kunye nokudala ubomi obuphefumulayo kwaye buphilisa ngokuzimela. Inentsingiselo yomculi oyingqayizivele kunye nencoko yaphezulu yokuphilisa, umxube omhle okuyimiphumo yalezo zihlandlo ezingapheliyo xa umculi ungaphaya kwakhe ukuba ahlangane nomntu ophezulu. Indalo kufuneka iphilise zombini umculi kunye nabaphulaphuli, ngokungafani nobugcisa bukaPicasso owamkhonza yedwa.
Imeko: Ndandonwabile ngokwenene ngomnye umntu owamngqina naye owamnxelayo kwaye wayefuna ukumpenda. Ndandisanda kuphuka kumntu owayengumhlobo wam obalaseleyo, kwaye wayesazi ukubaluleka kobudlelwane obusondela ekubeni ubambiswano lobomi.
Uvakalelwa kukuba: Ndandizibuza ukuba ngaba bantu ababini bafuna ukwabelana ngobomi kunye. Ngaba ndiza kuhlala ndijabulela ubudlelwane obungenakukhuseleka, ngaba ndiza kuvumela umntu ukuba andazi ngokupheleleyo? Ndandinemibuzo emininzi.
Ngombhobho wempuphu esandleni sam, imibala entliziyweni yam kunye nemibuzo engqondweni yam ndizimisele ukufumana into endiyithethayo yomtshato kwaye yintoni eyandivimbela ukuba ndifune ukuzibophezela.
Nangona ukupenda, iimfundiso zam ezinzulu zazingenangqondo, zatshintshwe ngopende ndibonayo into endiyayiqonda ngayo ngomtshato - 'Ukubhiyozela. Ukugqiba. Ukuphumla okuvuyolayo komnye nomunye ngaphambi kokuqala isigaba esilandelayo sobomi. Umvuzo omkhulu.
Umbhiyozo wokufumana wakho umlingane womphefumlo. Kodwa ukujonga ubuso bowesifazana endandiyifakile kwakubonakala ngathi yi-surreal, wayenelisekile. Andizange ndibukeke ngathi.
Ndabona, ukuba ndifumane umntu oye kwiphepha elifanayo aze ahambe ngenjongo efanayo kunye neenkolelo ezifanayo, okokuqala sifuna ukudibanisa izifundo zethu ezikunceda ukuphonsa ukukhanya ngentsingiselo ebalini lethu.
Sifuna ukunqula oothixo bethu (amandla) size silwe needemon zethu (iziphoso). Yiloo nto endiyifunayo ukuba ndiyenze ukunyathela kwintlambo kunye nolwalamano olufanelekileyo: Musa ukuvala iingcango.
Ndabona ukuba kufuneka ndize ndihambe kunye nenyaniso yam ukuze ndiyihlalutye, kwaye ndenze igalelo lam elingenalutho ukuze ndiyikhulule. Ukubukeka ebusweni bowesifazane kwakukho umntu oye wahlala kulolu hambo aze eze kuvaliwe. Ndabona ukuba andinayo loo nto, kodwa.
Umzobo: Umzobo ubonisa umthendeleko, ngexesha elide. Abantu ababini abanqwenela ukuphela kwesigaba esinye - ukukhangela ngaphakathi, nangenxa yokuba babona kuza 'njengomvuzo wokugqibela'. Ukwamkela phakathi kwabantu ababini abaye bazisebenzela kakhulu ngokwabo-ngokukhangela komphefumlo.
Ibonisa umzuzwana 'wokugqiba' ngamnye ebomini babo, apho bazibona khona, bahlala bodwa baze baphumulelane, ngaphambi kwesigaba esilandelayo - bebonke njengabadali bomsebenzi wobomi.
Ndaphefumlelwe ukuba ndifune ukulinganisela phakathi kwesifiso sam esinqwenelekayo sokuzimela kwaye ndikulangazelela ukuba kubudlelwane obuhlala ngonaphakade.
Ndandiqonda ukwesaba kwam kunye nokubandezela kwam ukuba ndiveze kumntu osondele kum.
Ndandiziva ndifuna ukuzamkela ngokwengeziwe ukuba ndibe ngumngcipheko okhululekile.
Ndabona into endiyayiqonda ngayo ngomtshato. 'Ukubhiyozela. Ukugqiba. Ukuphumla okuvuyokileyo nokuzinikela komnye nomnye - Umvuzo omkhulu.
Ndandiziva ndivuyiswa yinto ebekwe phambi kwam, kwakungekho nje umnqweno kumhlobo wam, kwakubonakala ngathi ndandifake igalelo eliqaqambileyo nam.
Ndaqalisa ukudweba ngaphezu kweminyaka engama-40 edlulileyo, ukuba ndibonise imifanekiso neemvakalelo eza kuza kumaphupha nokucamngca. Ngokuhamba kwexesha, ndafumanisa ukuba kufuneka ndiyenze oku ngaphantsi nangaphantsi, kwaye loo mzobo ongu mfanekiso wandithinte ukuba 'ndibone' kwakhona. Ukuba ndibe nombono wesibindi okanye ukuziva kakubi njengengqumbo, ndiyakwenza upende kwaye ayiyi kubuya. Umfanekiso wokuqala okanye ukuziva kwakucinywa, nangona bekuye 'kulungiswe' kwipende.
Ndilindele ukuba umvakalelo okanye umfanekiso ufike kum ongeke uboniswe nayiphi na enye indlela, ngoko ndiyifake ngokukhawuleza ipencil okanye i-pastels, ukuze ndikwazi ukuyilahleka. Emva koko ndiyipende nge-acrylics. Ukuba ukuphefumlelwa kwakungeyomvakalelo nje kunomfanekiso, ndiza kudlala ngeendlela ezahlukeneyo zokuzityhila ngeempawu zeepati okanye i-pastels, de kube yinto endiziva ngayo. Emva koko ndiza kuphuhlisa ngama-acrylics, kodwa ngokuqhelekileyo inkqubo yokwelapha yayiza kuhanjiswa kwinqanaba lokuqala.
Ngelixa ndayifaka into enhle kunye nemilingo endandiyibonile 'okanye ndiyicabangile, isenzo sokudweba satshintshile umfanekiso wokuqala, okhanyayo, ovanescent kunye nekopi ecacileyo. Ngamanye amaxesha ikopi yayiya kuba yinto enhle, kodwa kuba ndifanele ndiyipende ngokukhawuleza, kwakungowomgangatho omhle wobungcali.
Xa ndiyifake into yokuyikrazula, umphumo wawuya kuphazamiseka ukuba kukhangelwe ukuba kwakufuneka igcinwe kwikhabhinethi!
UMarcia Byrd uthi:
Ubugcisa beyilonyango lwam iminyaka. Ndafumanisa ukuba xa ndiphazamiseka ngobomi ngokubanzi, okanye ndijongene nemeko enzima, ndiyisebenzisa kangcono xa ndenza into yokudala nayo yonke into ephoxisayo kunye neengxaki zokungathembeki. Ngoku, xa ndifumana ngomsindo, ukukhungatheka, okanye ukuqhubela phambili ebomini bam, ndibamba amapende, amapensele, nezinye izinto eziphathekayo kunye ne-sketch yincwadi yam incwadi kwaye ndinako ukuhamba ngokuya kwindawo enokuthula ngaphandle kokushiya ekhaya!
Ndiqokelela umgca wengubo / iphepha lobugcisa, imibala ekhanyayo (amapensele embala yamanzi, amanqaku ebrashi kunye nabamakishi bokugqibela), ngamanye amaxesha izicaphuno ezimbalwa ezibonakala zingqinelana nale meko kwaye zenze iphepha elibhaliweyo lombhalo. Ngamanye amaxesha ndenza imvelaphi ngokubhala izicamango zam kwintlambo yendlela yokwazisa - ukuzalisa iphepha kwi "landscape" okanye kwi-orientation orientation, ngoko ndiyiphendule le ncwadi ijikeleze kwi "portrait" (ngokuthe tye) kwaye uqhubeke ubhala oko ndikubhalileyo ngaphambili. Oku kwenza imvelaphi enkulu, ufumana ezo ngcamango neemvakalelo ngaphandle kwipeni kwaye xa usuphelile, akukho mntu unokufunda i-angst kwiphepha.
Ubugcisa yindlela kuphela yokubaleka ngaphandle kokushiya ekhaya.
Ndidla ngokuziva ndizolile emva ko msebenzi.
Ndiyavuma kwaye ndamkela ukuba ndiyinyaniso engumculi.
Imibala ekhanyayo ndivuyisa.
Andikwazi ukushiya incwadi yesikhombiso okanye ikhava yesikhombisi. Ndiyifake iphepha elimhlophe kwaye ndivumele ubugcisa bam bube bude - kuthatha uxhalaba kunye nokukhathazeka kunye nokuzisola ukuhamba.
Scrapbook ye-Quilt's Scrapbook. Phylameana lila Desy
Umculi wangempela kwiprojekthi ye-scrapbook ngumama othungela amaninzi amanqwanqwa kwiminyaka engama-35. IKrismesi yokugqibela yayiyi-bonanza xa umama enqwenela ukubanika bonke. Andizange ndingazi ukuba unabaninzi babo bahamba. Iintombi, abazukulu, kunye nabazukulu-nkulu babemnandi abafumana i-stash ye-quilts enhle. Umama undixelele kanye ukuba xa ejonga enye yeengqungquthela zakhe ezikhumbuzayo ezaziza kuvela kwizinto eziye zazibona kwiiveki okanye kwiinyanga ezazisisebenzela kuyo. Iingqungquthela zaso zifana nezilwanyana ngexesha lakhe.
Ngosuku lweKrisimesi xa i-stack of quilts yayisasazwa phakathi kwamalungu omndeni wam, ndayiva umyeni wam embuza ukuba wayethabathe iifoto zazo zonke iigodo zakhe. Impendulo yakhe ngokukhawuleza yayithi "O, amazulu ayikho." Impendulo yakhe ephakamileyo yatyalisa imbewu engqondweni yam. Kamva ndafumana oodadewethu abathathu ukuba bangithumele i-imeyli ngamashishini edijithali. Akunjalo nje kuphela ama-quilts esiwanikwe kwiKrisimesi, kodwa kunye neefoto zaso naziphi na izicukuthi awazinike zona kunye nabantwana babo kwiminyaka edlulileyo. Ndacelwa ukuba i-assorment of quilt poses. Kwiifoto ezinye zee-quilts zaxhonywa njengeziboniso zodonga, ezinye zafakwa kwiibhedi okanye kwi-sofas. Ndagqogqa, ndanyatheliswa, ndaxakeka kunye neprojekthi ye-scrapbooking. Ndandicelile amalungu omndeni ukuba azibandakanye kwezinye zeefoto ukwenzela ukuba i-scrapbook ye-quilt yayiba ngumxube weefoto kunye neentsapho. Abanye babenjenjalo, kodwa abanye beyintloni, kodwa loo nto ayizange ndiyeke ukuba ndibeke abantu bexakeke kwezinye iifowuni zam zeentsapho zentsapho kwaye ndizifake kumaphepha e-scrapbook. Isicwangciso sam kwakukufumana le projekthi njengesipho kumama kuzo zonke iintombi zayo ezine ngoSuku loMama. Umsebenzi ufezekisiwe!
Ukubukela i-scrapbook kamva kwandinika ubungqina obuqinileyo bokuzikhukhumeza, kungekhona mna, kodwa kumama. Ungumfazi omangalisayo, ngokokudala.
Ukucwangcisa amaphepha ngamnye kwakuhlobo olufana nokuyila i-quilt ngaphandle kwephepha kunye nezithombe kunokuba iingubo.
Ndacinga ukuba umama wolondolozo lwam uncedo wandinceda ndikhethe iimpawu zemibala kunye nokuyila nganye yamaphepha.
Ndiyamthanda umama !!!
I-Blue Chain Beaded Pendant.
Ndenza ubumbi kwivili kwaye yenza i-rak firings. Ndenza ibhasikidi, umhlanga, i-pinene andle. Ndenza ubude beglasi kwaye ndenza ezinye iiglasi ezigubungelweyo.
Umhlengikazi onobulungisa usebenzisa i-Painting njengendlela yokuPhilisa.
UFrank Wisdom uthi:
Ndingumongikazi opheleleyo othanda ukuzithetha ngokwakhe kunye nobuchule bam ngokupenda. Isiqwenga esabelanayo apha sibizwa ngokuba yiPatchwork Heart.
Inkqubo yobugcisa yokuphilisa. Ndaqala uhambo lodweba ukutyhila oko kwakulele phantsi koqaphela kwam unyaka odlulileyo. Kwakuyimpumelelo ehlekileyo njengoko isalathisi esitsha ngasinye sityhilwa. Ngaphambi kokupenda ndihlala phantsi kwaye ndidibanise nomoya wam ongaphakathi kunye nomonde. Emva kokupenda ndihlala kunye nephepha lokubhala kwaye ndabhala malunga nezinto ezazivela ngexesha lokudalwa kwesiqwenga nokuba yintoni umfanekiso ogqityiweyo wathetha kum.
Ukuqonda okumangalisayo kutyhilelwe kum meko kule nkqubo.
Yonke imingxuma kunye neentsikelelo eziseleyo kwiintliziyo zethu ezilahlekileyo zidala i-patchwork ebomini bethu ebhalwe kwiintliziyo zethu.
Oku akuyiyo into yokufihla kwaye ingcwabe. Simele sivuyiswe ngovuyo kwaye sihlale sivulelekile kwimingeni kunye nentlungu. Yonke inxalenye yohambo lwethu kulobu bomi, izifundo esinokuzifunda nokukhula kuzo.
Dimond Miner uthi:
Ndisebenzisa ubugcisa ukuthatha amandla avezwe ngumsindo ukwenza into enhle. Ndiphinde ndibe negunya elingaphezulu kum, ukuze ndigcine amandla angaphezulu ukuba ndingabanjwa. Ndiyazi ukuba oku kuzwakala i-wacky kodwa isebenza kakuhle.
Ndiqala ngezulu, uze upende iintaba kunye nemilambo. Ndiyakuthanda nokwenza iziganeko zentlango. Kodwa into endiyithanda ukuyenza yintaka. Apha ndihamba ndifumane imifanekiso yeentaka kwiikhalenda. Emva koko ndawabeka kwindawo engathanda ukuyibona.
Ndiyayithanda amacandelo am. Ndiyamangaliswa ukuba baphuma kangakanani kuba andinakuthatha izifundo zobugcisa.
Ndiqalisile ngokubukela uBob Ross.
Izifundo endizifundileyo malunga nokudweba kukuvumela ukuba ubalekele konke ukungathí sina kwehlabathi.
Ngexesha lokwindlela yokupenda ndilahlekelwa kuyo kwaye ndilahlekelwe iingxaki zam.
Isitya esinezandla ezenziwe ngesandla.
Andikwazi ukuhlala ndize ndenze nto. Akunjalo kum. Ndimele ndibe nexakeka kwezandla zam, nokuba ndibukela umabonwakude. Ndineminyaka emdala izandla kunye nam amehlo azintle kangangoko ndisemncinci ngoko ndimele ndifumane ezinye izinto ukuba ndiyenze ukuze ndihlale nako ubude bexesha. Ukwenza iibhasikiti zelinen edibeneyo yindlela yam entsha yokuhlala.
Gxi ninisa. Into endiyifumeneyo kukuba xa ugxila kwinto ethile ke ezinye izinto ziphela. Kwaye kungonakali. Iimisipha zam aziyi kuphumla naliphi na ixesha ukuze zibuhlungu kwaye zibuhlungu kum. Ndijolise ekwenzeni ezi zibhakethi ngelixa ndihleli ukuze ndikwazi ukuqaphela intlungu okanye ndingayiqapheli ngenyameko ukuba andingagxininisa kwenye into. Ndingaqhawula amaninzi amaninzi njengoko ndizama ukwenza iipateni. Ndiza kuthatha iiprojekthi ezidlulileyo engizenzileyo ngeentlobo kwaye uzame ukusebenzisa ezo ipateni kwiibhasikiti zam. Olunye umsebenzi, abanye abakwenzi. Kuyimnandi ukuzama kungakhathaliseki ukuba ndiphela ngebhaksi okanye kungenjalo.
Into endiyifunayo ixhomekeke kwibhaksi nganye njengoko bonke bootitshala. Eyokuqala ndayenza ixesha elide kakhulu ukugqiba kuba andinakukwazi ukubona indlela yokwenza umtya ngaphandle kwemicu esebenza ngendlela evulekileyo okanye ebonisa kakubi. Ndandihamba ndaza ndazenza ezinye iibhasikiti ngaphambi kokuba zigqitywe. Ekugqibeleni ndaqulunqa indlela endinandipha ngayo. Oku kwandifundisa ukuba ndizinamathele kuyo nangona ndivakalelwa nje ukuba nditshitshise. Kwakufana neli nqanaba lobomi: Into ethatha ixesha elide ukuba yenzeke kodwa isengumsebenzi wobuhle.
Ndiyakholwa ukuba ukuphilisa ubugcisa bubugcisa obunembile. Kuyinto ukukhululwa kwamandla emvakalelo enika indlela ekudaleni indalo.
Xa ndiyicwecwe, ubugcisa bam buyicamngca kunye ne-transcendental. Andinayo ingcamango engaphambili yento endiyiyoyipayipi kodwa endaweni yoko ndivumela amandla ukuba aqondise ibrashi yam. Konke kwenzeka ngethuba nje xa i-brush igxuma kwinqanawa, ithatha nayiphi na intshukumo kunye nesimo esifanelekileyo.
Ndihlala ndibonakala ndipenda umfanekiso womntu ofanelekileyo - umzobo usoloko ufunwa ukuba unikezwe kumntu othile. Andizange ndiyigcine imidwebo yam.
Imidwebo yePencil Colors
Utyando lwezobugcisa. NguCedric AJAVON
UCédric Ajavon uthi:
Ndivakalelwa njengendoda eselula efuna into ethile.
Ndiyathanda ukudweba yonke into ephuma engqondweni yam. Andikwazi ukuchaza inkqubo kodwa into ekhethekileyo enegunya lokunika abantu uhlobo oluthile lolwazi. Ubugcisa bam bokubamba ngeepensele ezinemibala ndiyindlela yokudibana nayo kunye nokudibana nabanye abantu. Ndiza kuthetha ukuba ubugcisa bam buyakwazi ukuhlaziya kwinqanaba elithile labanye okanye bonke abantu. Ebukeka banobuqhetseba okanye bubuqili ngamanye amaxesha. Nguwe kuphela onokukwazi ukuxelela ukuba yintoni na kwaye kukuphi.
Ndivuyiswa gqitha ukubonisa ubugcisa bam.
Kunjengokuba ndinike ihlabathi into ekhethekileyo kwaye ndihlala ndizolile kunye ne-zen.
I-Eagle Glass Painting
Ndingumfana oneminyaka engama-50 ubudala. Ukuphulukisa ubugcisa kum kukukucamngca. Ndiye ndenza oku ukususela kwiminyaka eyi-18 ubudala. Kuhlala kumnye umntu. Andizange ndithengise enye. Andizange ndizenzele enye.
Nanini naxa ndivakalelwa kukuba umntu umboniso womfanekiso ufika engqondweni, ngoko ndiyipende. Ndiyipende ngeglasi. Umfanekiso uyenziwe ngasemva kwaye emva kokuba ujike khona apho. Awekho amagama angama-200 afika engqondweni. Ndiyayixabisa umntu, ndiyamkela, ndiyipende. Ndiyayixabisa, ndiyamkela, ndiyipende. Emva koko ndihlala ndibeka iinyawo ezimbalwa kwaye ndiyamangaliswa. Ndihlala ndicinga ukuba "Uvela phi?" "Ndiyenze njani loo nto?" Nangona ndiyazi ukuba ngubani owenza oko, kuhlala kumangalisa.
Ndiyathokoza ukuba ivela kum.
Ndibonelela ngezandla kunye nezinto zokusebenza, uMoya ngumculi.
Andizange ndibize ngokuba ngumculi. Ndithi nje ndingumdwebi.
Ipeyinti inikeza uvuyo kwaye ihlala iphilisa.
Ukuphulukiswa koBugcisa bobuGcisa boLuntu kuHlonipha iPTSD
Utyando lwezobugcisa. Audrey Clarke
U-Audrey Clarke uthi:
Ndiyindoda engumlindi oye wafunyaniswa ngePTSD ngenxa ye-MST ... kungakhathaliseki ukuba ndenze ntoni okanye ukuba ndizama kangakanani, andizange ndihambe ndihlale ndixakekile okanye ndive Ukuphulukiswa koBugcisa bobugcisa kundinceda ndigxilise kwizinto ezilungileyo eziphakathi kwam ngelixa ndikhangela iingcamango ezingathandekiyo neemvakalelo.
Ndaya kwiQela leNkxaso ye-PTSD yamaTyhini xa kuqaliswa unyango lwe-Art. Ndandiziva ndiphantsi kwaye ndibi kakhulu ngam. Umgqirha wasikisela ukuba sijonge kwiimboniselo zeemagazini kwaye sifumane enye into esinokuyiqonda ngayo, eyasithintela. Emva koko ndibona umfanekiso wekhozi. Into endiyibonayo ngokwenene kwakuyinkwenkwekazi eyayihlala iindidi ezinobungozi. Lowo ubetha ezinye iingxaki ezintle kwaye ungenalo ukwesaba uphakame esibhakabhakeni. Akunjengezinto ezingamampunge kodwa ngokunyanisekileyo uyazama ukuba aphumelele yena kuphela kodwa ngoLuthando lwenzalo yakhe.
Ndandiziva ndazibona kuloo mfanekiso njengomntu endingathanda ukuba. Ndandigxininise ngokukrokreka lo mfazi intaka. Ngelo xesha, indawo, kunye neemeko zam ukuba ndibe khona! Ndayibona iliso leentaka kwaye ndabona ukholo olungapheliyo nokuzimisela. Ndandifuna ukuba njenjalo ke ndirhola iliso njengowesifazana, kodwa linamandla. Emva kokuba ndibuyiselwe kakuhle, ndagqiba ekubeni ndifuna ukuba yiintsiba zakhe ezinemibala ngoba abafazi bahluke kakhulu. Uvela kuyo yonke indawo kwaye unokuhlala naphi na ngoba uyasinda.
Ndigcina umfanekiso kwindawo yam yobusuku, kuba imini yonke ndiyibona, ndiyamomotheka! *
Ngokwenene * Ekudaleni oku ndikwazi ukuthobela oko kwakuthetha ukuba "nguMsindisi". Ukulwa nazo zonke iingxaki, ndiyathanda ukuba ukhozi lukhona apha.
Ndafunda ukugxila kwamandla ambi ekudaleni ubugcisa obunentsingiselo kum iindlela ezenza ndiziqhenye ngokukwazi ukwenza oko.
Utyando lwezobugcisa. Toni Robinette
UToni uRobinette uthi:
Ukujonga ngaphakathi kwentyatyambo kunye nokubona ukulinganisa nokufezeka kwendalo endikhumbuzayo ngamandla endalo kwindalo kunye nathi njengemimoya kweli hlabathi.
Ndimele ndifumane intyatyambo ngobuhle kunye nombala. Kufuneka kubekho uxhulumaniso phakathi kwengqondo yam nentliziyo yam. Kufuneka kube nemihlali ekuthatheni umfanekiso kunye nokuwabelana ngawo. Ndasebenzisa i-Cannon 30D SLR nge-lens macro. I-poppy enye ndakhula.
I-Sunshine imele ukugcinwa kwamandla ebomini kubonakalisa amaqabunga.
Ubomvu beepalali ngumandla wobomi.
Ukulinganisa kwangaphakathi kukulinganisela kwendalo kunye nobomi bomntu.
Utyando lwezobugcisa. Christine Pennington
UChristian Pennington uthi:
Ndaqala ukwenza ii-watercolors emva kokuba ndifumanise ukuba ndiphethwe zizifo ezisongela ubomi kunye no-Oktobha ka-2009. Ndade ndibe ngumzila weeLightspeakers kunye neNgelosi enembile ngexesha elithile kodwa ngenxa yokuxilongwa ndaziva ndixakekile. Ngokukhawuleza kokuba ndiqalise le miboniso emitsha, imiyalezo yaqala, kwaye ndaxelelwa ukuba ndibeke embonweni ngokwawo. Njengoko ndenza, ndandibona ngokucacileyo imifanekiso yeeNgelosi kwiifom zokubonisa.
Ngokuqhelekileyo ndivakalelwa ngamandla ukuba ndiqoke izinto zam kodwa ndingenayo into yokuba umzobo uya kubonakala ngathi okanye nokuba yintoni imibala endayayisebenzisa. Ndiqala nje ngombala kwaye ndibukele iifom zenzeke, njengoko ndiyifumene kwaye ndifumana imiyalezo.
Ndiziva ndikunwaba kunye nokuphulukiswa kwamandla okuza kuvela kwisiqwenga esipheleleyo, ukuvakalelwa. Ndisoloko ndiziva ndinomnqweno oqinileyo wokuwabelana nabanye abaziva bekwesaba, belahlekile okanye bodwa, nokuba ngaba ngenxa yesifo somzimba okanye umva. Ndiyathemba ukuba baya kufumana ingqiqo efanayo yokwazi xa beyibona. Ukuqaphela ukuba abangekho bodwa, ukuba banamandla kuwo kwaye kukho izidalwa ezimangalisayo ezithunyelwa nguKhanya ukuzisa ngamnye wethu uncedo nobabalo luthando.
Utyando lwezobuGcisa ubuGcisa. nanassart
Mayelana nobuGcisa bam bokuPhilisa
nxu lumene nawe
kwaye ihlabathi libonakala
kuba yi nxalenye
Ndidibana kunye nam
Ndikhetha umculo wam
Ndiyolulela kuzo zonke iinkalo
ukuvumela konke ukuhamba
Ndijonge ngaphantsi kweso studio
yonke into endiyiyo
Ndiyongeza izitha kwiindawo zegraphite
kwelinye iphuzu kuvela isihloko
bayeka ukuzama kanzima
yonke into esiyidingayo ukuba siyazi ngaphakathi kuthi
qha ga mshelana, yintloko
uthathe ixesha lokuxhuma, ukuphefumla, ukuxabisa, vumela
Ndiyayithanda lo mdwebo, njengoko kuyimvakalelo, ndiyayibona kwaye ndiyamomotheka
Ndiyisebenzisa uReiki nokucamngca rhoqo
Ndiye ndafunda indlela yokuphilisa ngokwam, ngokuvumela amandla okuthanda umhlaba jikelele, ngokuvumela ukuba ndibe ngumntu ongcono
Ndijonge kule mzobo kwaye udibanise nobuhle bobomi
Ingelosi kunye neHalo
Ndiyayixabisa umntu, ndiyamkela, ndiyipende. Ndiyayixabisa, ndiyamkela, ndiyipende.
Inner Self Shield
Ukubonakalisa kwangaphandle kwe-Self Inner Self Shield. Umfazi waseWhiteehorse
Njalo inyanga ezintandathu ndizitshekisha kunye nam. Yiba malunga nam umzimba wam, ngokomzwelo, ngengqondo, okanye ngokomoya. Emva koko ndenza ummeli wento eyenzekayo ngendlela ebizwa ngokuba yikhuselo (bona iifoto zokhuseleko lweentliziyo). Ikhuseli iboniswe apha kukubonakalisa kwangaphandle kwezinto ezenzeka ngaphakathi kwam.
Unokufunda ngokubanzi malunga nenkqubo yam "yangaphakathi yomculi" apha.
Qaphela: Owesifazane wase-Whitehorse, umphululi welifa lemveli yaseCherokee, unomdla ngokuphindaphindiweyo kwisayithi kwaye yangaphambili ibanjwe njengomongameli weforam ngaphambi kokuba iqonga lidibaniswe ngo-2014.
ubugcisa obungabonakaliyo. Daniela
Ndineminyaka engama-28 ubudala. Ndineentsapho ezintle kunye nabahlobo abamangalisayo. Ndiyamthanda ukuthanda umntu ngokwenene. Udwebo luye lwahlukana nobomi bam njengaye nje ngokuba wam ngumntu / ngumculi omangalisayo. Wandifundisa indlela yokupenda. Leli bali elimnandi kuba emva kweminyaka embalwa yezifundo saqala ukungavumelani kwimpahla. Ndathi kuPapa andicinga ukuba ungandifundisa nantoni na into ngenxa yokuba wakhuthaza ubuqili kwaye konke endifuna ukuyipenda kwakungabonakali. Ukudweba oko kwakungqondweni yam. Le yifoto yesinye sezinto zam zokuqala zokulenga.
Ukuyeka kuhambe. Ukuhamba ngokomoya ubomi buye bandithenga apha. Umama wehlabathi lonke undiphefumlele kwaye uThixo uye wamvumela. Le Webhsayithi incede ndincede ukuba ndivule kwaye ndihlanganyele oko ndifundiswayo kwaye ndicinga ukuba yinkqubo kuba ndifumene ukuphefumlelwa okukhulu apha. Njengoko uthando lukwabelwana ngayo, ngoko ke uvuyo lobomi benothando kunye nokugqithiseleyo kwaye kwaye kusekhona yonke into yokudala. Mhlawumbi ndiyenze ngokukhawuleza kodwa ukubujonga ngoku kuya kwenza ndive ndiyathandwa kuba ekugqibeleni ndifumene ubomi.
Inkondlo endibhalileyo ingacacisa kakuhle oku:
wayeziva, wakhala, wabuhlungu iminyaka,
Iinyembezi zakhe zinoyika ukuba uyatyala
wavala kwaye walahlekelwa yinto eqala ukulwa nayo,
isifundo sasingenaso isigwebo, ukukhomba okanye ukuthatha, ukhetho luyenziwe
kubonakala ngathi iyintsikelelo, bunjani ubuhlungu besifundo esibaluleke kakhulu
wayeziva, wayegubha, wabuhlungu iminyaka.
Dream State. lizard57
Ubugcisa bubhekiselele ekuzibonakaliseni kwakho kwaye ngokudweba i-design engabonakaliyo ongayilungisa kwaye uphinde uphinde ubonise ingcamango okanye ukuvakalelwa. Njalo xa ndijonga enye yam indalo ndiyibona ngokuhlukileyo kwaye ngale ndlela ndiyakhula kwaye ndiphilise kumanqanaba amaninzi. Ndiye ndifunde ukuzikhulula kwiimbono zangaphambili zezinto zobugcisa kunye nokuyeka ukubhalisa ngokuthi 'kuhle okanye kubi' - kunjalo nje.
Ndiyakuthanda ukusuka kwimemori yephupha okanye into endiyifumene nayo. Iqala njengale ngcamango ekhanda lam kwaye iphendukela kwenye into. Andizange ndikwazi kakuhle oko kuza kuza kum njengoko ndisebenza.
I-Empath ifumanisa ubuchule bokuphilisa
Ngaba Unokuphulukisa Amapendula Ahlambuluke njengezinto zokugqoka?
IiNdaba zoBwenene kwiZiko loLwazi
Ngaba U-Sharks Uhlala Ulele, Kanjani?
Imithandazo yokutya yabantwana kunye neentsikelelo zokutya
Indlela yokusebenzisa iAtreb verb yesiTaliyane
Ngaba ama-Atheists angavota i-Republican Party?
Ukungahambi kakuhle kwamanzi
Mictecacihuatl: Uthikazikazi Wokufa e-Aztec I-Mythology yenkolo
KwiNtloko yeeLwandle lokuLoba
Isihloko sokufundisa Isivakalisi usebenzisa iiModeli
IDan Quayle Quotes
Iintlanganiso ze-Gettysburg: Iintlanganiso eziManyeneyo kunye namaSolezwe eMfazwe